Muxuu Yariisow kala hadlay Suxufiyiin uu ugu yeeray xarunta Gobolka Banaadir? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Muxuu Yariisow kala hadlay Suxufiyiin uu ugu yeeray xarunta Gobolka Banaadir?
September 13, 2018 at 23:21 Muxuu Yariisow kala hadlay Suxufiyiin uu ugu yeeray xarunta Gobolka Banaadir?2018-09-13T23:21:07+00:00 WARARKA SOOMAALIYA
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho, ayaa shalay oo Khamiis aheyd wuxuu xarunta Gobolka Banaadir ugu yeeray tiro Suxufiyiin ah oo wararka ka doona Gobolka Banaadir, iyadoo ay jirto wada shaqeyn xumo ka dhaxeysa Afhayeenka Gobolka Banaadir iyo Suxufiyiinta.
Arrinta ugu muhiimsan ee Yariisow uu ka dalbaday Suxufiyiinta ayaa waxa ay tahay inay la shaqeeyaan Maamulkiisa, islamarkaana aysan tabin wararka xanafta leh ee xarunta Gobolka banaadir ka jira iyo wararka la xiriira isqab qabsiga xubnaha Gobolka.
Arrintaan ayaa waxa ay ka dambeysay, kadib markii ay soo ifbaxday ceeb la xiriirta in Afhayeenka Gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar uu damaaciyay lacagaha Mushaaraadka ah ee Shaqaalaha Gobolka Banaadir in laga jaro qoondo uu ku sheegay in qalab loogu soo iibinaayo Idaacada Gobolka Banaadir, ee Agaasimaha uu ka yahay.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir C/raxmaan Yariisow, ayaa u sheegay Suxufiyiinta inaysan ka hadlin arrimahaasi, isagana uu xalin doono ceebta ka dhacday Xarunta Idaacada Gobolka Banaadir, maadaama falkaasi uu ku kacay Afhayeenka.
Yariisow ayaa si dadban Suxufiyiinta ugu balan qaaday inuu siin doono dhaqaale, kadib markii Suxufiyiinta ay ka dacwoodeen Afhayenka Gobolka oo lunsaday dhawr mar lacago Wariyeyaasha loogu talo galay.
Intii uu socday kulanka ayaa Gudoomiyaha Gobolka Banaadir wuxuu ka dalbaday wada hadalka dhexmaray Suxufiyiinta iyo Duqa Muqdisho in aan cidna loo sheegin ama looga xog waramin.
“Waxa na dhexmaray qolkaan haku ekaadaan oo yaysan jirin in cid kale aan ka maqlo ama aad uga sheekeysaan.” Ayuu yiri Duqa Muqdisho oo Suxufiyiinta kala dardaarmaayay in warkaasi uusan dhaafin iyaga kaliya.
Qaar ka mid ah Shaqaalaha Gobolka Banaadir, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya Idaacada Gobolka ayaa la sheegay in shaqo joojin lagu sameeyay, kadib markii ay diideen in Mushaaraadkooda laga jaro lacago qalab loogu soo iibiyo Idaacada Gobolka.
Fadeexada ka dhex taagan Idaacada Gobolka Banaadir iyo madaxda Maamulka Gobolka ayaa waxa ay muujinaysa fashilka Maamulka Gudoomiye Yariisow haysta, maadaama la maraayo marxalad ah in Mushaarka shaqaalaha laga jaro lacago, si qalab loogu soo iibiyo Idaacada Codka Gobolka Banaadir ku hadasha.
Maamulkii Gudoomiye Taabit ayaa si wanaagsan ula macaamili jiray Suxufiyiinta, islamarkaana ma jirin wax wada shaqeyn xumo ah, balse Yariisow iyo xubnaha la shaqeeya ayaa ku sifoobay is qabqabsi iyo buuq socda.
« 22-year-old Somali man suffers head injuries during argument in St Julian’s
Keating oo ka dayriyay xaaladda Tukaraq »